Imifekelelo yomluki & yomluki - iChina oyilweyo kunye nabenzi kunye nababoneleli
Imveliso yelaphu eyimbali ende, ngoku eyenziwe ngumatshini. Umzi-mveliso wethu owasekwa ngo-1984, sinamava kakhulu kwiimfakamfele & kwimveliso ephothiweyo. Abasebenzi bethu banokuqhuba oomatshini abaninzi. Kwaye umatshini omnye unokufumana i-20-30pcs iimveliso ezifanayo ngexesha elinye. Senza ezi mveliso zamalaphu ukuba zisebenze ngokufanelekileyo. Ke abathengi banokufumana ngamaxabiso aphantsi. Sinokubonelela ngeemfakamfele kunye nemveliso ephothiweyo. Ukuhonjiswa kunye nemveliso ephothiweyo iyathandwa njengenxalenye yomhombiso weengubo / ii-caps / iingxowa. Ingakumbi iphantsi MOQ kunye nemveliso emfutshane ekhokelela kwixesha loyilo olwenziwe ngokwezifiso. Uninzi lwabathengi bakhetha oku ukwenza ilogo yabo / uyilo emva koko banamathele kwiimveliso eziphambili. Kwaye olu hlobo lwe-logo luzinzile, kwaye emva kwamaxesha amaninzi hlamba usaqhubeka njengowokuqala. I-logo ye-embroidery inefuthe le-3D. Kwaye kuyilo oluthile olukhethekileyo, lunokwenza uyilo lubonakale. Umzekelo, ezinye izilwanyana zineenwele. Imisonto inokwenza ukuba iinwele zibe zezokwenene ngakumbi kokubonakala kunye nokuchukumisa. kodwa kwilogo encinci kunye noonobumba abalukiweyo banokufumana iinkcukacha ezingcono. Kwaye singenza ephothiweyo nge-embroidery logo kwimveliso enye. Kwaye sihlala sinika eyona ngcebiso kubathengi bethu. Wamkelekile thumela uyilo lwakho kuthi!
Ibha yenqanaba / Inqanaba loMkhosi iBar / Inqanaba loMkhosi / ...